ओली र अब्बासीबीचको भेटवार्तामा के कुरा भयो ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
ओली र अब्बासीबीचको भेटवार्तामा के कुरा भयो ?
होटल याक एन्ड यतीमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको कार्य अझै बाँकी रहेको बताउनुभएको उहाँका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा चुनावी प्रक्रियाबाट राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँहरुबीच क्षेत्रीय र द्विपक्षीय हितका विषयमा पनि खुलेर छलफल भएको सल्लाहकार रिमालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“हामीले द्विपक्षीय चासो र हितका साथै आर्थिक विषयमा छलफल ग¥यौँ ।”